‘गोरखामा बाबुरामको गद्दारीले भत्कियो लाल किल्ला’ – Everest Dainik – News from Nepal
‘गोरखामा बाबुरामको गद्दारीले भत्कियो लाल किल्ला’
२०७४, ३ श्रावण मंगलवार
गोरखा, साउन ३ गते । बाबुराम भट्टराईले आफ्नै इतिहासमा गद्दारी गरेको कारण गोरखाको लाल किल्लामा कांग्रेसले रजाई गरेको वामपन्थी कार्यकर्ताहरु बताउँछन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा गोरखा जिल्लामा नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी बनेपछि बाबुरामलाई आदर्श मानेर कम्युनिष्ट भएकाहरुले उक्त आरोप लगाएका हुन । नेपाली कांग्रेसले जिल्लाका ११ स्थानीय तहमध्ये ९ वटामा विजय प्राप्त गरेको छ ।
माओवादी जनयुद्दकाल र शान्ति प्रक्रियामा समेत कम्युनिष्टहरुको बाहुल्यता रहेका गोर्खा जिल्लामा नयाँ शक्तिलाई मत बाँडिएका कारण माओवादी केन्द्रले पराजय हुनु परेको निष्कर्श कतिपयको छ । मतका हिसाबले नेपाली कांग्रेसले माओवादी केन्द्र भन्दा जम्मा तीन हजार मात्रै बढी मत प्राप्त गरेपनि “लाल किल्ला भत्काएको” मा कांग्रेसी बृत्तमा भने ठूलो खुशी छाएको छ । “आफै सिद्दिए उनीहरु । बाबुराम फुट्दा फाइदा हामीलाई भयो ।” जिल्लाका एक कांग्रेसी नेताले भने । नाम नबताउने शर्तमा ती नेताले केही वडाहरुमा नयाँ शक्तिले समेत अघोषितरुपमा नेपाली कांग्रेसलाई सहयोग गरेको दावी गरे । “हिजोको तुष बाँकी थियो उनीहरुको ।” उनले भने, “माओवादीलाई जसरी पनि हराउनु पर्छ भन्ने तप्काका केहीले चुनावमा सहयोग गरे ।” उनले कुन कुन वडामा त्यसो भयो भन्ने भने खुलाउन चाहेनन् ।
गोर्खा सदरमुकाममा भेटिएका ‘अविराम’ देवकोटा भने बाबुरामले गद्दारी गरेको कारण गोर्खाबाट कम्युनिष्ट सकिए भनेर प्रचार गर्नेहरु हर्षित हुन पुगेको बताउँछन् । हिजो सबैलाई युद्द र क्रान्तिमा हिँड्न प्रेरित गरेका बाबुराम आफैले बाटो त्यागेपछि जिल्लामा नकारात्मक मानसिकता जन्मिएको उनले बताए । “आफैले हिजो क्रान्तिको कुरा गरे, उनको सिको गरेर कैयन् हामीहरु पछि लाग्यौं । तर अहिले एकाएक व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न उनले पार्टी छोडेपछि ‘राजनीति भनेको यस्तै रहेछ, यस्तै रहेछन् यी कम्निष्टहरु’ भन्ने छाप जनतामा पर्यो । यसको फाइदा कांग्रेसले उठायो ।” उनको् विश्लेषण छ ।
पछिल्लो निर्वाचनको मत परिणाम हेर्दा सबै पालिकाका अध्यक्षहरुको मत हेर्दा कांग्रेसले ३८ हजार ५ सय ५६, माओवादीले ३५ हजार २७ र नयाँ शक्तिले १४ हजार ३ सय ४४ मत ल्याएको छ । अहिले पनि नयाँ शक्ति र माओवादीको मत जोड्दा यो कांग्रेसभन्दा १३ हजार बढी हुन जान्छ । “बाबुरामले गद्दारी नगरेको भए यो मतले लाल किल्ला जोगिने थिएन त ? अब कसलाई फाइदा भयो बाबुराम ज्यू” देवकोटा प्रश्न गर्छन ?
कांग्रेसले संगठन नै बलियो भएको कारण मत आएको दावी गरेपनि गोर्खामा कम्युनिष्टहरुको हारको मुख्य कारण भने बाबुराम भट्टराईको विभाजन नै हो । नेपाी कांग्रेसका जिल्ला सचिव नन्दप्रसाद न्यौपानेले कांग्रेसको विरासत गोरखामा रहेको दावी अहिले गरेपनि माओवादी एक ढिक्का भएको भए कांग्रेसभन्दा दोब्बर मतले माओवादी अगाडि हुने बताउँछन् माओवादी केन्द्रका जिल्ला इन्चार्ज चुडामणी खडका । “पार्टी विभाजनपछि पनि हामीले यति धेरै मत ल्याउनु सामान्य कुरा थिएन । हामीले संगठनलाई सकेसम्म जोगायौं । जसरी पनि माओवादी हराउनु पर्छ भनेर नयाँ शक्तिका साथीहरुले अन्य पार्टीलाई सहयोग गरे । जनताको नजरमा हामी अहिले पनि जितेकै छौं ।” उनी भन्छन् । निर्वाचनलाई चुस्तरुपमा परिचालन गर्न नसक्नु जस्ता आन्तरिक कारण जिम्मेवार रहेको समेत उनले बताए ।
ट्याग्स: Baburam Bhattarai, Gorkha
सेक्स नचाहने (असेक्सुएल) एउटी युवतीको जीन्दगी
मलेसियाद्वारा नेपाललाई १५८ रनको लक्ष्य